Warshad Soo Saarta Dhirta | Shiinaha Plant Soosaaraa-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Kiristaalo dabiici ah oo midab-cawl leh, oo qayb-translucent ah ayaa laga soo ururiyaa jajabyada ku yaal jirridda geedaha kaafuur ee weligood aadka u quruxda badan oo kora in ka badan 130 fuudh (40-50m). Dhirtaasi waxay Shiinuhu u arkaan inay yihiin kuwo muqaddas ah waxayna na siinayaan hadiyadda ay ka samaysan tahay xaydha dhalada ah.
Nadaafad sare 98% min Caleen Alkoolo caleen 928-96-1 cis-3-Hexenol
Magaca Kiimikada: Khamriga Caleenta
Foomka Molecular-ka 6 C6H12O
Cufnaanta: 0.848 g / mL at 25 ° C (shidan)
CAS Lambar: 928-96-1
daahir ah iyo dabiicadda menthol crystal / L-menthol 99% oo leh qiimo wanaagsan cas 2216-51-5
L-Menthol, iskudhis dabiici ah, bilaa biin dhadhan aan caadi ahayn ama granular.Waa qaybta ugu weyn ee basbaaska iyo basbaaska saliida lagama maarmaanka ah. Waxay kujirtaa bilaash iyo gobolka ester.Menthol wuxuu leeyahay 8 isomer, oo leh sifooyin udgoon kaladuwan. L-menthol waxay leedahay udgoon menthol iyo saameyn qaboojiye, racemthol sidoo kale waxay leedahay saameyn qaboojiye, iyo isomarada kale malaha saameyn qaboojiye.Waxaa loo isticmaali karaa caraf udgoon cadayga, cadarka, cabitaanka iyo nacnaca. maqaarka ama xuubka xabka oo leh qaboojin iyo saameyn antipruritic; Waxaa loo isticmaali karaa madax xanuun, sanka, dillaaca iyo laryngitis.
beta-Pinene (β-pinene) waa dareere aan midab lahayn, ku milma aalkolada,
laakiin biyo maahan.
Waxay leedahay ur geed-cagaaran oo geed-cagaaran u eg. Waxay ku dhacdaa si dabiici ah rosemary,
dhir, dill, basil, yarrow, iyo ubax. Sidoo kale waa qayb weyn oo ka mid ah
carfo udgoon iyo dhadhan.
Alpha Pinene dextro HOP wuxuu adeegsanayaa adeegsiga daawada firfircoon ee dhexdhexaadka ah, warshadaha daryeelka dalagga iyo kiimikada caraf udgoon.
Magaca Kiimikada: Carvacrol
Muuqaal: aan midab lahayn oo dareeraha huruudka ah ee fudud
Dareeraha tayada sare leh ee Tristyrylphenol ethoxylates CAS 99734-09-5 oo leh qiimo wanaagsan
Dareeraha tayada sare leh ee Tristyrylphenol ethoxylates CAS 99734-09-5 oo leh qiimo wanaagsan Faahfaahinta wax soo saarka: Magaca Kiimikada: Tristyrylphenol ethoxylates Moulacular Formula ： C30H24O. (C2H4O) n CAS: 99734-09-5 Codsiyada: Aaladda aan-ionic ahayn ee si ballaaran loogu dabaqay beeraha. Xirxirida: 25kg / durbaan ama 200kg / durbaan, ama si waafaqsan shuruudahaaga. Waa in lagu keydiyaa meel qalalan, qabow iyo hawo leh, iska ilaali cidlada iyo qoyaanka, ka fogee oxides-ka ITEM INDEX Sifooyinka Jaale huruud ah ...
100% nadiif ah oo dabiici ah geranyl butanoate cas 106-29-6
100% nadiif ah oo dabiici ah Geranyl butanoate cas 106-29-6 Faahfaahinta wax soo saarka: Magaca Kiimikada: Geranyl butanoate CAS 106-29-6 Codsiyada: Dhexdhexaadiyeyaasha Noolaha ah, Baakadaha Baakadaha: Waxaa lagu soo buuxiyay durbaanno, miisaanka saafiga ah 25kg, 50kg, 175kg ITEM INDEX Muuqaal aan midab lahayn dareeraha huruudda ah ee Dhir Macaan Macaan Mawduuc cusub (GC) ≥97% Culeys Gaara @ 25 ℃ 0.890 ~ ​​0.898 Index Refractive Index @ 20 ℃ 1.455 ~ 1.460 * Intaa waxaa dheer ： Shirkadu waxay baari kartaa oo ay horumarin kartaa alaabada cusub ...
100% daahir ah oo dabiici ah L-menthyl Acetate cas 2623-23-6 qiimo wanaagsan
100% saafi ah oo dabiici ah L-menthyl Acetate cas 2623-23-6 oo leh qiimo wanaagsan Faahfaahinta wax soo saarka: Magaca Kiimikada: L-menthyl Acetate Micnayaasha: cis-1,3, trans-1,4-menthol acetate Molecular Formula: C12H22O2 Molecular Weight : 198.3 CAS No. Waxaa loo isticmaali jiray qurxinta, biyaha musqusha, sidoo kale waxaa loo isticmaali jiray saabuunta; Waxaa sidoo kale laga dhigi karaa dhadhanka Oriental iyo dhadhanka liinta. Baakadaha: Kuxiran d ...
Saliida lagama maarmaanka ah waxaa loo isticmaali karaa fooxa, duugista iyo alaabada daaweynta jirka. Waxaa jira laba nooc: mid waa saliid lagama maarmaan; tan kale waa 100% saliid muhiim ah oo saafi ah. Waxay ka dhigi kartaa dadka inay dareemaan dabacsanaan jir iyo maskax ahaanba, sidaa darteed waxay dadka ka ilaalin kartaa cudurada iyo gabowga.
fasalka dawada dawada dabiiciga ah oo saafi ah Borneol / D-borneol 96%
Magaca Badeecada: Dabiiciga ah Borneol
Qeybta dhirta: Caleemaha borneol ee dabiiciga ah
Habka Soo-saarista: Kala-baxa Steam
Fasalka Sare Shiinaha Saliida Qoryaha saafiga ah iyo dabeecada Tung Oil CAS 8001-20-5
Saliida Tung, sidoo kale loo yaqaan Shiinaha Wood Oil, Lumbang oil, Noix d'abrasin (fr.) Ama si fudud saliida qoryaha, waxaa laga sameeyaa iniinyaha iniinyaha ee geedka Tung (Aleurites fordii iyo Aleurites montana, qoyska Euphorbiaceae).
Saliida loo yaqaan 'Tung oil' waxaa loo adeegsan jiray keyd ahaan maraakiibta qoryaha. Saliida waxay dhex galeysaa alwaaxa, ka dib wey adkeyneysaa si ay u sameyso lakab biyo-biyood oo aan la dabooli karin (biyaha celiya) ilaa 5 mm qoryaha. Kahortag ahaan waxay waxtar u leedahay shaqada bannaanka ka saraysa dhulka hoostiisa, laakiin lakabka khafiifka ah ayaa ka dhigaya mid aan faa'iido badan u lahayn ku dhaqanka.